Nepali Rajneeti | गगन थापा ‘बिना ब्याट्रीको रेडियो’ हुन !
कार्तिक २०, २०७८ शनिबार ६२ पटक हेरिएको
१) हे गगन थापा !! आज तिमिले जनताको पार्टी नेकपा एमालेलाइ कुचोँ लगाएर बढार्ने कुरा गरेउ । यदि तिमी प्रजातन्त्रको जननी हुँ भन्ने काँग्रेसको सच्चा कार्यकर्ता हौ भने चुनावमा जनतालाई निष्पक्ष ढंगले भोट हाल्न दिम तब थाहा हुन्छ कि जनताले कसलाई बढारेर कहाँ पुरयाउने छ ।
संसदीय ब्यवस्थामा कसलाई राख्नु पर्ने र कसलाई फ्याक्नु पर्ने हो त्यो जनताले फैसला गर्ने हो न कि तिमी जस्ता बिना ब्याट्रीको रेडियोले ??
जनता माज आफ्नो घर लाई लोकतान्त्रिक नीति सिकाउनु होस हाम्रो घरको चिन्ता तपाईंले गरि राख्नु पर्दैन गगन थापा ज्यु 🙏🙏 कमरेड महेश बस्नेत ले भक्तपुरमा गर्नुभएको विकास देखेर नडराउनुहोस । भक्तपुरको जिम्मा महेश बस्नेतले नै लिने हो लिरहनु भएको छ। यो खबर पाथिभरा न्युजमा छ ।